April 8, 2020 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar iyo macluumaad la helay waxay tilmaamaysaan in afar qof oo laga helay maanta Caabuqa Corone-Virus, labo kamid ah ay ahaayeen Shaqaalaha wasaaradda Caafimaadka, gaar ahaana madaxda Waaxyaha qaarkood, waxaana la ogaaday macluumaad cusub oo tilmaamaya in ay labo maalin ka hor la kulmeen madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Xogtu, waxay sheegaysaa in ay shaqaalahan la kulmeen Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre, oo ay xiligaas kala hadleen arrimaha ku saabsan musuqmaasuq lagu sameeyey kaalmo lacageed oo loogu talo-galay la dagaalanka Caabuqa Corone Virus.
Warar madax banaan ayaa cadeynaya in ay hadda socdaan baaritaano dheeraad ah, oo ku wajahan arrimahan, gaar ahaana halka ay shaqaalahan caafimaadka kasoo qaadeen xanuunkan.
Qofkii u horeeyey ayaa galabta u geeriyooday xanuunkan gudaha Soomaaliya, waxaana ilaa hadda cabsi laga qabaa in uu xanuunkan ku badan yahay gudaha dalka.
Dhammaan shaqsiyaadkii ay la kulmeen dadkan laga helay galabtay ayaa lagaliyey marxalad karantiil ah, taas oo muujinaysa in welwel weyn la qabo waqtigan, waxaana aan la garan Karin in lakarantiili doono madaxdii kala duwanaa ee ay is arkeen Saraakiisha caafimaadka.
La yaabku waxuu yahay kuwa sida xun ay uugu dhacday hunguri xumadu. Wakhti wax la xado miyaa lagu jiraa.